फे’सबुक चलाउनेहरुका लागी आयो खुशीको खबर’ – AB Sansar
फे’सबुक चलाउनेहरुका लागी आयो खुशीको खबर’
October 7, 2020 October 7, 2020 adminLeaveaComment on फे’सबुक चलाउनेहरुका लागी आयो खुशीको खबर’
काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठूला इन्टरेनट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिङ्कले पब्लिक वाईफाईका लागि फेसबुकसँग सहकार्य गरेको छ । विभिन्न सार्वजनिक स्थानमा वाईफाई उपलब्ध गराउँदै आएको वर्ल्डलिङ्कले त्यसका लागि फेसबुकसँग सहकार्य सुरु गरेको हो । कम्पनीले यसबारे आउँदो बिहिबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत आधिकारिक रुपमा जानकारी दिने तयारी गरेको छ । हालसम्म उपलब्ध जानकारी अनुसार वर्ल्डलिङ्कले फेसबुकले उपलब्ध गराउँदै, **थप भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’,
आएको एक्स्प्रेस वाईफाई नेपालका सार्वजनिक स्थानमा उपलब्ध गराउन सम्झौता गरेको हो । फेसबुकले एक्स्प्रेस वाईफाईका लागि विभिन्न प्रान्तका विभिन्न देशमा रहेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग यसको लागि सहकार्य गर्दै आएको छ । जसमध्ये एसियामा भारत र नेपालमा यो सेवा उपलब्ध रहेको छ । नेपालको तर्फबाट वर्ल्डलिङ्कले यो सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको फेसबुकको एक्स्प्रेस वाईफाईको वेबसाइटमा समेत उल्लेख गरिएको छ ।
सहकार्य अनुसार फेसबुकले पब्लिक वाइफाईलाई सस्तो, भरपर्दाे र उच्च गतिको वाईफाई प्रदान गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा सामान समेत उपलब्ध गराउँदै आएको फेसबुक एक्स्प्रेस वाईफाईको वेबसाइटमा उल्लेख छ । यो विषयमा थप जानकारी आउँदो बिहीबार कम्पनीको प्रेसमिट पश्चात उपलब्ध गराउने छौं । -टेकपाना
देशैभरी छरिएर रहेका विद्यार्थी र बिद्यालयहरुलाइ नेपाल सरकारले भर्खरै दियो अत्यन्तै खुसिको खबर !
बाइकमा लिफ्ट माग्ने केटीको पछि गएर भयो यस्तो सोच्नै नसकिने घटना !
मुन्द्रेको कमेडी क्लब बाट दिपाश्री निरौला लाई हटाईयो, करिश्माको प्रवेश !
सुन्दा अ’चम्म लाग्न सक्छ , तर यो सत्यता नै हो ! आमा बन्दै श्वेता खड्का !
December 9, 2020 santosh
आज पनि ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य September 24, 2021